Horudhac: Manchester United vs AC Milan… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya garoonka Old Trafford) – Gool FM
Horudhac: Manchester United vs AC Milan… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya garoonka Old Trafford)
Haaruun March 11, 2021
(Manchester) 11 Maarso 2021. Labo ka mid ah kooxaha waa weyn ee qaaradda Yurub ayaa isku farasaaraya caawa garoonka Old Trafford, iyadoo Manchester United ay la ciyaari doonto AC Milan tartanka Europa League, waxaana labada dhinacba ay raadinayaan koob Yurub ah.
Man United iyo AC Milan lugta hore ee wareegga 16-ka Europa League, koox walibana waxa ay raadinaysaa inay wareeggaan horumar fiican ka sameyso si ay ugu sii dhowaato u soo bixitaanka wareegga siddeed dhammaadka tartankan.
Tartanka: UEFA – Europa League
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 08:55 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Garsooraha: Slavko Vincic (Slovenia)
Manchester United ayaa la filayaa inaysan heli doonin labadeeda weeraryahan ee Marcus Rashford iyo Edinson Cavani kulanka caawa lugta hore ee 16-ka Europa League oo ay wajahayaan AC Milan.
Rashford ayaa la bedelay intii lagu guda jiray kulankii ay 2-0 uga adkaatay Man United kooxda Manchester City ee Axaddii kaddib markii uu dhaawac ka soo gaaray Anqowga.
Waxaa Rashford raacaya Weeraryahanka kale ee kooxda, Cavani, kaasoo isaguna seegay kulankii Derby Manchester, dhowaan ayuuna ka soo laabtay dhaawac Muruqa ah, iyadoo uu hore u maqnaa Pogba.
Goolhaye Dean Henderson ayaa markale ciyaari doona oo shabaqa u geli doona Manchester United, maadaama uu maqan yahay David de Gea, kaddib markii loo fasaxay dhalashada cunuggiisii ugu horreeyey.
Dhinaca kale Weeraryahanka AC Milan ee Zlatan Ibrahimovic ayaan wajihi doonin kooxdiisii hore, sababo la xiriira dhaawac bowdada ah, waxaana xiddigan reer Sweden ayaa ka mid ah tiro xiddigo muhiim ah oo dhaawacyo ku maqan.
Kooxda reer Talyaani ayaa sidoo kale safartay iyadoo ay ka maqan yihiin Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic iyo Mario Mandzukic.
Diogo Dalot, kaasoo heshiis amaah uga maqan Man United ayaan wajihi karin caawa kooxda Milkiyaddiisa leh ee reer England.
>- Kani waxa uu noqon doonaa kulankii 11-aad ee kooxaha Manchester United iyo AC Milan ku dhexmara tartammada Yurub, dhammaan 10-kii kulan ee hore ayay wada dheeleen European Cup/Champions League.
>- Kulankoodii ugu dambeeyey oo ay wada ciyaaraan labadaan kooxood waxa uu dhacay bishii Maarso 2010-kii, markaasna Manchester United ayaa AC Milan uga adkaatay 4-0, waana guuldarradii ugu darnayd ee kooxaha reer Talyaani kala kulmaan tartammada waa weyn ee Yurub (marka laga reebo Super Cups).
>- Iyadoo United ay 11 dhibcood ka hooseyso kooxda hoggaanka u haysa horyaalka Premier League ee Manchester City, fursadaha ugu fiican ee ay ugu guuleysan karaan koobab xilli ciyaareedkan waxay u muuqdaan inay yihiin Europa League iyo FA Cup, balse waa haddii ay horumar ka sameeyaan labadaan tartan.
>- Man United ayaan la garaacin 23 ka mid ah 25-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartanka Europa League.
>- AC Milan ayaan laga adkaanin 10 ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartanka Europa League.
>- Manchester United ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool saddexeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku qaabishay AC Milan tartammada oo dhan.
Manchester United, Arsenal, AC Milan, AS Roma & Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaari doono tartanka Europa League